IMeneja yeTheku bayifuna kuKhomishini kaZondo – Bayede News
IMeneja yeTheku bayifuna kuKhomishini kaZondo
Kuleli sonto ithunyelelwe amasamanisi ngesandla
by Bayede-News Posted on 15 August 2019
IMeneja kuMasipala iTheku uMnu uSipho Nzuza
Kuleli sonto ithunyelelwe amasamanisi ngesandla sikaNobhala weKhomishini inxuswa ukuba izofakaza
NJENGOBA kulezi zinsuku amehlo ethe njo kuMasipala iTheku kulandela izinguquko ezinqala ezenziwe iSigungu Esiphezulu se-African National Congress (ANC) esifundazweni kubonakala izinto zisazoqhubeka nokushuba njengoba ngoLwesibili abeHhovisi likaMehluleli uRaymond Zondo onguSihlalo weKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso bethumele amasamanisi kuMeneja yalo Mkhandlu ukuba azokwethula ubufakazi.
[button color=”green” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]QHUBEKA UFUNDE[/button]
NgoLwesibili iKhomishini kaMehluleli uZondo ithumele amasamanisi kuMnu uSipho Nzuza ngokulandela iSigaba 3(2) soMthetho WamaKhomishini okuyinika amandla okubizela noma ngubani ukuba azokwethula ubufakazi phambi kwayo.
Emasamanisini okuvela ukuthi athunyelwa ngoLwesibili futhi amukelwa ngawo iKhomishini inxusa uNzuza ukuba balethe ubufakazi obungaba izincwadi, imiqingo nanoma yini ephathekayo anayo zingakapheli izinsuku ezilishumi ethole amasamanisi konke lokhu akwethule eParktown eGoli lapho kuhleli khona iKhomishini.
Amasamanisi aqhuba athi uma konke lokhu okubalwe ngenhla kungekho noma ehluleka ukukuveza njengoba kuchaziwe kuyodingeka enze incwadi efungelwe ezoqondiswa kuKhomishini zingakapheli izinsuku ezilishumi. Amasamanisi athunyelwe ngesandla sikaNobhala Obambile weKhomishini uNks uBrigitte Shabalala.
Imibiko ithi uNzuza ungufakazi ophambili ecaleni elibhekene neMeya esanda kuxoshwa esikhundleni uNkk uZandile Gumede lenkohlakalo yezigidi ezingama-R208 zethenda yokuqoqwa kukadoti.
IMeya ixoshwa nje, bese ziqinile izinsolo zokuthi ubuhlobo phakathi kwayo neMeneja abubuhle obese kudala ukuthi kungasebenzeki.
UNzuza uthathe lesi sikhundla ngowezi-2017 emuva kokungavuselelwa kwenkontileka kaMnu uSibusiso Sithole ababengaboni ngasolinye naye.
USithole wahamba kungasekuhle sekuhluleke nemizamo yakhe yokuba kuvuselelwe inkontileka yakhe ngoba ekholwa wukuthi kuningi okusamele akulungise kulo Mkhandlu.
Waphoqwa ukuba ahlabe ikhefu ngaphambi kokuphela kwenkontileka yakhe. Akuphelanga isikhathi esingakanani noNzuza wazithola esesimweni esifanayo emuva kokusebenzisana neHhovisi loMcwaningimabhuku nethimba lakhe ekucwaningeni amabhuku alo Mkhandlu ngonyaka odlule.
Ukucwaningwa kwawo kwaphoqeleka ukuba kumiswe noNzuza wavula icala kulandela ukuthola izinsongo zokubulawa.
Ngaleso sikhathi wakhuluma kanje: “Sizokwenza isiqiniseko sokuthi bayaqhubeka nokusebenza, umsebenzi wokucwaninga awumi. Okusemqoka kithina ukuqinisekisa ukuthi baphephile nemiqingo abasebenza ngayo nabayidingayo iyavikelwa”.
Emuva kokuboshwa kukaNkk uGumede wavela enkantolo yamacala athinta imali waze wadedelwa ngebheyili ye-R50 000, uNzuza wathwala kanzima ezama ukuchazela izinkumbi zabeseka uNkk uGumede abamashela eCity Hall eThekwini befuna incazelo yokuthi kungani engabuyiselwa esikhundleni.
UNkk uGumede uzidalele amazinyo abushelelezi ngokunyusela amaholo abazibiza ngokuthi babengamasosha oMkhonto Wesizwe abaqashwe emikhakheni ehlukene kuMasipala ekubeni abanye abasebenzi benganyuselwanga. Nakulolu daba kwaba khona ukushayisana ngalo phakathi kwakhe neMeneja uNzuza.
Usolwa nangokuphendula uMkhandlu ube yikwampunzedlemini ngokuvumela abazibiza ngamadelangokubona bazichanasele. Leli qembu laziwa ngokumisa zonke izinhlelo zentuthuko kulo Mkhandlu emalokishini nasemadolobheni ngoba lithi kumele kubhekelelwe amalungu alo kuqala.
Elokishini eMlaza kusanda kuqala ukuqoqwa kukadoti emuva kokumiswa kwezinkontileka ezazisebenza, okwalandela ukuthi basabise ngokuthi bazobavimba bonke abazongena kuleli lokishi bezoqoqa udoti.
Isiga sokuxoshwa kukaNkk uGumede sesingenwe nawuphiko lwabesifazane kuzwelonke eqenjini elibusayo i-ANC Womens League.
UMengameli walolu phiko uNks uBathabile Dlamini ohlangane nobuholi be-ANC KwaZulu-Natal ngoLwesithathu uthi sekwejwayelekile ukuthi abesifazane abasezikhundleni basuswe kalula kodwa kube yinto ehlukile uma sekuza ngakwabesilisa.